Shahaadooyinka Dhex-dhexaadinta - Su'aalaha iyo Jawaabaha Wareysiga - Iskuulka ITS Tech
Koorsada tababarka kala qaybsan ayaa ku siin doona qaababka la filayo inay kala soocaan macluumaadka mashiinka-abuuray ee isticmaalaya barnaamijka furan. The Splunk Analytics ayaa ku siin doona fursad aad ku miisaameyso tirooyinka aad u sareeya. Koorsada shahaadada ee "Splunk" waxay ku dhex jirtaa tababarka baaritaanka lagama maarmaanka u ah, wadaagida iyo isfahanka natiijooyinka, samaynta astarrada iyo noocyada dhacdooyinka, soo saarista warbixinnada, iyo sameynta jaantusyada. Waxay kaa caawin doontaa inaad ka shaqeysid mashiinka lakabaji, Splücs syslog, sslog server, imtixaan gaaban, qaylo dhaan, weydiin, iyo dashboards oo aad ka dhigi kartaa horumariye Splunk ah.
Ku-dhaqanka Splunk wuxuu baddali doonaa ganacsigaaga unauna qaadayaa heerkan soo socda. Noqo sida tan, su'aashu waxay tahay: Ma waxaad xoogga saartaa dabeecadaha iyo kartida loo yaqaan 'Splunker'? Dhanka khatarta ah ee haa, ka dibna isku day inaad u noqoto qofka ugu macquulsan ee la kulmayo marka la eego xaqiiqda ah in mucaaradka aan caadi ahayn. Waxaad ka bilaabi kartaa adigoo ku dhex jira su'aalaha waraysiga ugu wayn ee la yaqaan 'Splunk' kuwaas oo lagu sheegay boggan.
10 Su'aalo iyo Jawaabo Wareysiga loogu talagalay Shahaadada Splunk
Waa maxay Splunk? Waa maxay sababta Splunk loo isticmaalo xogta mashiinka mashiinka?
Maxay yihiin qaybo ka mid ah injineernimada isku dhafan?
Waa maxay isticmaalka Master Master in Splunk?
Waa maxay isku xirka Splunk DB?
U sharax 'xad-gudubka liisanka' ee laga soo bilaabo "Splunk".
Waa maxay liistada mawduucyada ku jirta xargaha?
Muxuu yahay noocyada kala duwan ee tirooyinka iyo dhacdooyinka amar?
Maxay yihiin barkadaha Splunk? Fahmso nolosha nolosha.
Cadee awooda Maareeyaha Digniinta?
Cadee farqiga u dhexeeya raadinta madaxa qaybta iyo raadinta boobka madaxa?
Splunk waa Google ee macluumaadka mashiinkaaga. Waa software / gaari loo istcimaalo si aad u aragto, fiirisid, u dhawaaqid, iyo kormeeridda xogtaada ganacsigaaga. Splunk waxay qaadataa macluumaadka macaamiisha faa'iido leh waxayna u bedeshaa aqoonta kartida leh iyadoo siinaysa faham wakhti go'an oo ku saabsan xogtaada iyadoo loo marayo jaantusyada, taxaddarrada, warbixinnada iyo wixii la mid ah.
Splunk waxaa loo isticmaalaa in la jabiyo xogta mashiinka maaddaama ay ku siin karaan waayo-aragnimo maamulka maamulka, hawlaha IT-ga, amniga, iskudubarida, aqoonsiga been-abuurka, ogaanshaha khatarta iyo wixii la mid ah.
Eeg madaxa - waxay siinaysaa GUI inay raadiso
Raadiye - faylasha xogta mashiinka iyo xogta.
U gudbinta - Gawaarida waxay galaan Indexer
Adeegga Kumbuyuutarka - Waxay maamushaa qaybaha kala duwan ee loo qaybiyo xaaladaha la faafiyo.
Xuddunta liisan ee Splunk ayaa masuul ka ah hubinta in cabbirka ugu fiican ee xogta la xareeyo. Liisanka xargaha wuxuu ku xiran yahay mugga xogta oo maraya marxaladda gudaha 24hr iyo qadadahan oo kale, damaanad qaadaya in dhulka uu ku sii jiri doono xaddiga mugga la helay.
Waa nidaam xog guud oo SQL ah oo kuu ogolaanaya inaad ku dadaalid inaad ku darto xogta xogta macluumaadka Splunk weydiimaha iyo warbixinnada. Waxay siinaysaa isdhexgalka, la qabsashada iyo isdhexgalka waqtiga dhabta ah ee u dhaxeeya shirkadda Splunk iyo macluumaadka macluumaadka xiriirka.
Haddii ay dhacdo in aad ka baxdo xadka xogta, ka dibna waxaa laguu muujin doonaa qalad "qalad jebinta". Ruqsadda ruqsadda ee la tuuray, waxay ku sii jiri doontaa maalmaha 14. Ganacsiga ama liisanka ganacsiga waxaad ku heli kartaa 5 ogeysiin gudaheeda 30 daaqad maalgelin ka hor inta aanad kuusoo sheegin liistada liistada indexer iyo liiska. Foomka bilaashka ah, waxay tilmaamaysaa 3 oo keliya oo taxadar leh.
Liiska Warbixinta waa faylka caadiga ah ee faahfaahinta (feylka mashquuliya Shirkadda wuxuu isticmaalaa fursadda ka horaysa inaadan muujin). Fursadda aad ka dooratid inaad doorato noocyo badan oo ka mid ah warbixinnada liisaska liiska waxaad u baahan tahay inaad sameysid faylal fara badan.
Soo-ururinta tirakoobyada waxay ka dhigtaa fikrado qalafsan oo ah mid kasta oo ka mid ah goobaha hadda ku yaal ee ku xusan foorarkaaga laguu xilsaaray oo u diyaari ahaan tayada cusub ee goobaha cusub. Eventstats waxay u egtahay macaamilada xisaabinta, marka laga reebo natiijooyinka uruurinta waxaa lagu darayaa munaasib kasta oo kaliya haddii ay wadajirku la xiriiraan dhacdadaas. Eventstats waxay diiwaangelisaa codsiyada cabirada sida stats, si kastaba ha ahaatee waxay isu geyneysaa xogta ugu horeysa.
Diiwaangelin ay ku jiraan xogta diiwaangashan waxaa loo yaqaannaa weel "Splunk". Waxa intaa dheer waxa ku jira dhacdooyin waqti go'an. Nolol-noolaansho baddan waxay ku dhex jirtaa qaadashada marxaladaha dambe:
Kulul - Waxay ka koobantahay xogta xilli dambe ee liiska waxayna u furan tahay qaabaynta. Liis kasta, waxaa jira ugu yaraan hal baaldi kulul oo la heli karo
Kulaylka - Macluumaadka marxaladda diirran ayaa ka dhaqaaqay kulul
Qabow - Xogta qaboobaha qabowga ayaa ka soo baxday diiran
La qaboojiyey - Xogta ayaa ka dhaqaaqday barafo. Tusayaasha ayaa tirtira xogta adag ee maaddooyinka dabcan, si kastaba ha ahaatee, macaamiishuna sidoo kale way awoodaan.
Roodhi - Macluumaadka dib loo soo dejiyey diiwaanka faylka. Fursada aad ku diiwaan geliso xogta adag, waxaad mar dambe kuugu soo celin kartaa diiwaanka adigoo dhuubanaya.
Kormeeraha diyaar-garowgu wuxuu muujinayaa hoos u dhaca inta ugu dambeeya ee la soo daayo iska ilaali, tusaale ahaan, dhacdooyinka diyaar. Waxay bixisaa isku xirka si aad u aragto liiska taxanaha ah ee ka digtoonaaday firfircoonaanta. Sidoo kale waxay muujinaysaa magaca diyaarinta, codsiga, kala-soocida (oo la duubay, wakhtiga dhabta ah, ama daaqada), cufnaanta iyo qaabka.
Raadi ururinta masruufka waa ururo isku xiran oo loo isticmaalay in lagu wadaago khidmadda, Qaab-dhismeedka iyo xogta macaamiisha halka ay eegayaan koox-kooxeedku waa qayb ka mid ah shirkad-xayiraad raadis ah oo loo buuxiyo sida hantida odhaahda ee raadinaya. Maaddaama kooxda madaxa-baadhista ay xoojinayaan qayb ka mid ah is-waafajinta, dashbo-yada iyo munaasabadaha la midka ah ayaa loo socon karaa oo laga arki karaa qof kasta oo ka mid ah farabadan.